Property Todayइँटाको विकल्पः गोर्खा इको प्यानल - Property Today
Property Today Nepal
बैंक / बिमा
टिप्स / ट्रिक्स
5 Ways to Boost Your Router Security
मन्त्री महासेठ साँच्चैका ‘सेठ’, सम्पत्ति अथाह, १५८ बिगाह जमिन !
घरजग्गा मेला असार १ बाट काठमाडाैंमा, सस्ताे मुल्यमा घर पाइने
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (LIVE VIDEO)
‘रियल इस्टेट मार्केटिङ’ तालिमको १२औं ब्याच अायाेजना
सोलु करिडोर प्रसारणलाइनका ठेकेदारलार्इ कुलमानकाे चेतावनी : आउँदो मार्चभित्रै नसके पेनाल्टी असुल्नेछाैं
नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान, करिब दुई खर्ब लाग्ने अनुमान
स्काईवर्थकाे वर्ल्डकप अफर, टिभी खरिदमा २५% ‘क्यासब्याक’
दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण हुने भूकम्पपीडित ४ लाख पुगे
इँटाको विकल्पः गोर्खा इको प्यानल
भवन निर्माणमा प्रि–फेब्रिकेटेट (छोटकरीमा प्रि–फ्याब) प्रविधको प्रयोग नौलो होइन । भवनको संरचनालगायत विभिन्न भाग कारखानामा पहिले नै बनाएर निर्माणस्थलमा लगेर जडान गरिने भएकाले यस प्रकारको प्रविधिलाई ‘प्रि–फेब्रिकेटेट’ भनिएको हो । विश्वका विभिन्न मुलुकमा दशकौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको यस्तो प्रविधि नेपाल भित्रिएको भने धेरै भएको छैन । खासगरी विभिन्न विदेशी परियोजनामार्फत नेपाल भित्रिएको यस प्रविधिको निर्माणमा अहिले थुप्रै नेपाली कम्पनीहरु पनि आइसकेका छन् । यो क्रम गतवर्षको भूकम्पछि भने अत्यधिक बढेको देखिन्छ ।
यही प्रविधिमा आधारित ‘गोर्खा इको प्यानल’को उत्पादन भने नेपालमा सन् २०१४ बाटै शुरु भएको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका कृष्णभक्त दुवालले इँटाको विकल्पका रुपमा ‘इको प्यानल’ को उत्पादन थालेका हुन् । पारिवारिक व्यवसाय इँटाभट्टा भए तापनि इँटा वातावरणमैत्री नभएकाले त्यसको विकल्पबारे अध्ययन गर्दै जाँदा इको प्यानल उत्तम हुने देखेर नेपालमा यसको उत्पादन थालेको दुवालको भनाइ छ ।
जर्मन प्रविधिको इको प्यानललाई नेपालमा इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल (आईजीडीएन) प्रालिले भिœयाएको हो । आईजीडीएन भवन निर्माण सामग्री उत्पादनमा कहलिएको बहराइनको अल खाजाह कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा २०१४ मा स्थापना भएको हो । अल खाजाह इको प्यानलसमेत विगत २० वर्षदेखि उत्पादनमा गर्दै आएको कम्पनी हो ।
गोर्खा इको प्यानल हलुका तौल भएको क्याल्सियम सिलिकेट बोर्ड (फ्रेस बोर्ड), बालुवा, सिमेन्ट, ईपीएस (चलनचल्तीको भाषामा थर्मोकोल) लगायतका कच्चापदार्थको मिश्रणबाट बनेको इन्टरलकिङ प्रि–फ्याब्रिकेटड स्यान्डविच प्यानल हो । यी कच्चापदार्थको प्रयोगका कारण गोर्खा इको प्यानलमा न्वाइज इन्सुलेशन (साउन्ड प्रुफ), फायर फ्रुप (चाँडै आगोले नसमात्ने), वातावरणमैत्रीलगायतका विशेषता छन् । ताप तथा ओसको असर पनि थेग्ने हुँदा यसको प्रयोगबाट बनाइएका कोठा गर्मीमा शीतल र जाडोमा न्यानो हुन्छ । यो प्यानल धेरै पुरानो प्रमाणित प्रविधिबाट निर्माण भएकाले टिकाउ पनि रहेको दाबी कम्पनीको छ ।
गोर्खा इको प्यानल इँटा जोडाइबाट बनाइने परम्परागत गारोको विकल्प हो । २० देखि ३० तलासम्मको भवन निर्माणमा यो प्यानल प्रयोग गर्न सकिने दुवालको दाबी छ । आवासीय भवन, व्यापारिक कम्प्लेक्स, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था आदिको स्थायी निर्माण गर्नमा यो प्यानलको स्ट्याण्डर्ड साइज २ फिट चौडाइ र ७.५ फिट लम्बाइ रहेको छ । मोटाइ ६० देखि १२० एमएमसम्म हुन्छ । प्यानलको आकार ठूलो भएको हुँदा निर्माण अवधि चाँडो हुनेछ । त्यस्तै, प्यानको फिनिसिङ स्मुथ रहेकाले प्लाष्टर पनि गर्नुपर्दैन । यो जडान गर्न पनि सजिलो छ । ज्वाइन्टमा एडेसिभ सिमेन्ट र पीयू फोमको मात्र प्रयोग गरिने हुँदा जडान गर्दा कुनै च्यानलको प्रयोग गर्नुपर्दैन । छोटो निर्माण अवधि, सहज जोडाइ, स्मुथ फिनिसिङ आदि कारणले यो प्रविधि कम खर्चिलोसमेत छ । विभिन्न प्रकारका गोर्खा इको प्यानलको मूल्य प्रतिवर्गफिट १ सय ८० देखि ४ सय ६५ रुपैयाँ पर्छ । अन्य प्रिफ्याब प्यानलको तुलनामा यो सस्तो भएको कम्पनीका सीईओ समेत रहेका दुवालको दाबी छ ।
गोर्खा इको प्यानल ‘टङ्ग एण्ड ग्रुभ’ आकारले ‘लक’ हुने भएकाले ज्वाइन्ट बलियो हुन्छ । हेर्दा गह्रुँगो देखिए पनि यो प्यानलमा प्रयोग हुने थर्मकोलले गर्दा परम्परागत गारोभन्दा तीनगुणा कम तौलको हुन्छ, जसले गर्दा इँटाको जोडाइबाट बनाइने गारोभन्दा भूकम्पबाट यो बढी सुरक्षित त ।
प्लानल निर्माणका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ शुरुआती दिनमा ५० प्रतिशतसम्म चीन, दक्षिण कोरियालगायतका देशबाट ल्याउने गरेको आईजीडीएनले अहिले १०% मात्र आयात गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ । बाँकी ९० प्रतिशत सबै स्थानीय कच्चापदार्थको प्रयोगबाट प्यानलको निर्माण भइरहेको दुवालले बताए ।
आईजीडीएनले स्यान्डविच प्यानल, हाइब्रिड प्यानल, सोलिड प्यानल र हलो प्यानल उत्पादन गर्दै आएको छ । यीमध्ये पर्खालका लागि स्यान्डविच प्यानल प्रयोग हुन्छ ।
उत्पादन सुरु गरेको छोटो अवधिमै गोर्खा इको प्यालनले सफलता पाएको दुवाल बताउँछन् । अहिलेसम्म पूर्वको विराटनगरदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म, गोर्खा, मनास्लुको विकट गाउँसम्म यो प्यानलका उपभोक्ता रहेको उनको भनाइ छ । यसबाहेक ललितपुर बालकुमारीको वेष्टर टावर, कलङ्कीको मेघा कम्प्लेक्स, ठमेलको छायाँ कम्प्लेक्स, बानेश्वरको श्रीकृष्ण टावर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल अस्पताल, निर्वाचन आयोगलगायतले पनि गोर्खा इको प्यालनको प्रयोग गरेको दुवालले जानकारी दिए ।
सम्पूर्ण कागजात पेश गरेर भवन विभागबाट अनुमतिको पर्खाइमा रहेको गोर्खा इको प्यानलबाट घर बनाउँदा नक्सा पास सजिलै हुने सकिन्छ ।
तारे होटलमा लगानीको होडबाजी, १८ पाँचतारे र १४ चारतारे थपिँदै
घर बनाउँदा यस्तो छ नक्सा पास प्रक्रिया
निजीक्षेत्रबाट पाँचखालमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने प्रस्ताव – ३७ अर्ब लगानी, १८ हजार रोपनी क्षेत्रफल, एक लाखको बसोबास
Tweets by @property2day
Admark Media Pvt. Ltd.
Phone: +977 1 4481143
Nepal Buildcon Expo 2016
Nepal Buildcon Expo 2015
Safe Home Expo 2015
Copyright © 2017 Admark Media Pvt. Ltd. All rights reserved.
Design & Developed by Shrijan Shrestha
Subscribe and notify yourself about our news